I-China i-Towable Boom Lift yoMvelisi kunye noMthengisi | Daxin
Uluhlu lweplatform: 900mm * 700mm
Uluhlu lomthamo: 200kg
Uluhlu lweMax Platform: 10m ~ 16m
I-inshurensi yasimahla yokuthumela elwandle ekhoyo
Ixesha lewaranti yeenyanga ezili-12 kunye neenxalenye zokuzikhulula zasimahla ezikhoyo
Umboniso weFoto yokwenyani
Ukuphakamisa i-Boom Lift luhlobo lwesixhobo sokuphakamisa i-hydraulic enokujikeleza i-360 ° ukuphakamisa abahamba ngeenyawo okanye iimpahla. Sineentlobo ezininzi ze ukunyusa i-boom ukukhetha kwi. Inkampani yethu inokubonelela ngezixhobo eziphakanyisiweyo kunyeukuziphakamisa kwe-boom ephakanyisiweyo. Izixhobo zokuphakamisa i-hydraulic zineempawu zokuhamba ngokulula, ukusebenza ngokulula, indawo enkulu yokusebenza kunye nokusebenza ngokuchanekileyo. Iibhola ezirhuqwayo zisetyenziswa kakhulu kumashishini nakwimimandla efuna ukusebenza kweendawo eziphakamileyo ezifana nezikhululo, amadokodo kunye nezakhiwo zikawonkewonke. Khetha izixhobo zokwakha ozifunayo uze kum ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu. Umgangatho wethu kunye nenkonzo ayinakukuphoxisa.
Umbuzo: Ngaba ingalo esongelayo kufuneka ifakwe ukuze isebenze?
A: Oku kusekelwe kwiimfuno zakho zokukhetha i-DC okanye i-AC, sinokukubonelela ngayo.
Q: Kuthekani ukuba ndifuna ukwazi ixabiso elithile?
A: Unokucofa ngokuthe ngqo "Thumela i-imeyile kuthi" kwiphepha lemveliso ukusithumela i-imeyile, okanye ucofe u "Nxibelelana nathi" ngolwazi oluthe kratya. Siza kubona kwaye siphendule kuyo yonke imibuzo efunyenwe lulwazi loqhakamshelwano.
Q: Ngaba imveliso yakho ineqhosha lokumisa likaxakeka?
A: Iimveliso zethu zineqhosha lokumisa likaxakeka ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzisi bethu kwimeko yokumka kombane okanye ezinye iimeko zikaxakeka.
Q: Ngaba amaxabiso akho analo ukhuphiswano?
A: Umzi-mveliso wethu wazise imigca emininzi yemveliso ngokusebenza okuphezulu kwemveliso, imigangatho yemveliso, kunye nokunciphisa iindleko zokuvelisa ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ke ixabiso lihle kakhulu.
Omnye wabathengi bethu eMzantsi Korea uthenge ingalo erhuqwayo esetyenziselwa ulondolozo kunye nokucoca. Kuba isikhululo seenqwelomoya sihlala kwindawo enkulu kakhulu, banokusebenzisa imoto ngokulula ukutsala ingalo esongelayo yokwenza nayiphi na imisebenzi yolondolozo okanye yokucoca. Banokuphatha ngokulula umsebenzi ophakamileyo emva kokuthenga ingalo esongekileyo. Ingalo elandelwayo yokuphakamisa isandla inokujikeleza i-360 °, eyenza ukuba uluhlu lwayo lomsebenzi mkhulu. Ngale ndlela, akukho sidingo sokutshintsha izikhundla rhoqo ngelixa usebenza.
Umthengi wethu waseFrance uthenge oomatshini bethu bokwakha ukuba basetyenziswe eluntwini. Izixhobo zokwakha zinokunceda abanini eluntwini, ukucoca iglasi ephezulu, ukuthena imithi emide okanye ukulungisa izixhobo zoomatshini eziphakamileyo. Ingalo esongelweyo inesakhono esomeleleyo sokudlula kwimiqobo kwindawo ephezulu, kwaye kukhuselekile ukuyisebenzisa kwindawo enzima yokuhlala. Iqonga lokuphakamisa liqhutywa sisixhobo samanzi, ke ngoko lizinzile kwaye likhuselekile, kwaye abasebenzi basebenza ngokuzinzileyo.
Ubungakanani Ngokubanzi (L * W * H)
Ubukhulu: 7 * 1.7 * 2.2M
Ukuxhasa umgama wokuhamba kwemilenze (oxwesileyo)
Ukuxhasa ukuhamba kwemilenze (nkqo)
Inqanaba lokumelana nomoya
20 '/ 40' Isikhongozelo Ukulayisha Ubungakanani
40 '/ 2 iiseti
Iindlela zamandla ezininzi ziyafumaneka
Amandla ePetroli (Honda Motor)
Amandla ombane we-AC (Imoto yeXi'an)
Amandla ebhetri e-DC (iBucher Motor)
Idizili + Amandla e-AC (Amandla eHybrid)
Irhasi + AC Amandla (Amandla aHlanganisiweyo)
Idizili + DC Amandla (Amandla aHybrid)
Irhasi + DC Amandla (Amandla aHybrid)
Amandla e-AC + DC (Amandla eHybrid)
Ukukhanya kwe-LED kwibhasikithi yokusebenza ebusuku (SIMAHLA)
Ukukhanya komsila kunye nokuKhanya kweBrake (SIMAHLA)
Ukukhanya kwesilumkiso kwii-4pcs iinyawo ezizenzekelayo ezixhasayo (SIMAHLA)
IJamani yangenisa i-ALKO Brand Brake (SIMAHLA)
Iphaneli yokuLawula Ubungqina bamanzi kwiQonga
Iphaneli yokuLawulwa okungangenwa ngamanzi eyi-2
Ibhokisi yombane engenaManzi, Isalathi saMandla ebhetri, iStop Emergency
Inqwelo yedizili yeYSD
Imoto yedizili / yeGesi zixhotyiswe ngesantya sokuhambisa ngesandla.
Injini yePetroli yeHonda (Ngokukhetha)
ISwitzerland Bucher DC Ibhetri yeeMoto (Ngokuzithandela)
I-Torsion Shaft enomsebenzi omkhulu wokutsala,
Ngamavili erabha womoya, waqhekeza uMagnetic Magnetic
Isilinda seNdlela ezimbini kunye neValance Balance kunye noTshintsho oluNgxamisekileyo lokuTshintsha
Ukuchaneka kweHydraulic Hose, ngokuqinisekileyo akukho kuvuza kweoyile
Intonga yokuLawula ii-4pcs ezizenzekelayo zeMilenze yokuXhasa i-Hydraulic
Inkqubo yeAlarm yeTayile yeHydraulic
2 yeWindows yokugcina ngokulula
I-360degree Turn Plate ngesantya sokunciphisa isantya seTekhnoloji yeMoto.
I-Telescopic Boom ye-14m 16m yeentlobo zeemodeli
Uyilo olukhethekileyo oluHlangeneyo
Uxhumano oluchanekileyo / iiClamps
Ukutyibilika Ibhloko Telescopic Boom
Ibhasikithi ehlala ihleli kunye noLwakhiwo lwe-Anti Pinch Design
Ileli noMnyango weQonga
I-Basket Lungisa ukutshintsha kwemilinganiselo
Ukukhusela ukhuseleko lwebhasikithi kuthintela ukuShukuma xa usiya ebhasikithini.
Isilinda esincinci phantsi kweBhasikithi ukugcina iPlatform ithe tyaba
Ukuphakamisa nokugcina ibhalansi
Ukuthintela ukuShukuma xa usiya eLift
Isenzi se-Angled Sensor, iQonga alinakuphakama / lihle ukuba umzimba ungaphezulu kwe-4
Tshintshela umda kuKhuseleko
I-Siren inokuqhagamshelwa okanye inqanyulwe
Intonga yokuthambisa engenakuchazeka
Ukupeyinta okuGqwesileyo kunye nePower Coating Spray Paint
Iingcingo ezicocekileyo kunye neeHydraulic Hoses
Icwecwe kwaye ichanekile kuyilo loLwakhiwo
Ii-4pcs ezizenzekelayo zeMilenze yokuXhasa ngokuSebenza ngokuLungelelanisa i-Angle
Amavili Ibhalansi Ibhalansi
Iseti epheleleyo yamanqaku eSilumkiso
Egqithileyo I-China Wheelchair Lift Supplier Residential Use ngexabiso lezoQoqosho
Okulandelayo: Iphrofayili ephantsi yeScissor Lift Table
v Ukuxhobisa Jemani ALKO iziqhoboshi brand ezikumgangatho ophezulu
v Ukuxhobisa Swizalend IBucher isikhululo sempompo yohlobo lwe-DC
v Ukuxhobisa Japhan Uhlobo lweHonda brand isikhululo sokumpompa
v Ukuxhobisa China Eyaziwayo Isikhululo sempompo yedizili yeYSD
v Ukuxhobisa into evikela amanzi nothuli ibhokisi yombane yobungqinaIlungele ukusebenza ngaphandle.
v Ipaneli yolawulo lwamanzil Unokuba ne-Equipd xa kunetha.
v Ukulinganisa ngokwakho ukusebenza ngokukuko nangokukhuselekileyo
v Injini yedizili enobungqina bamanzi, imoto kunye nesembozo sebhetri
v Umntu umngxuma wokungena kulondolozo olufanelekileyo lwemihla ngemihla
v Isicwangcisi sedizili yenjini yedizili ebhetyebhetye ngakumbi ekusebenzeni.
v Iisilinda ezibini zendlela ezinevalufa yokulinganisa kunye nokucima ukutshintsha okungxamisekileyo. Nokuba kuphuka umbhobho we-hydraulic, iqonga alisoze liyeke phantsi ukuze liqinisekise ukuba likhuseleke ngokupheleleyo.
v Ukuxhotyiswa nge Ukutshintsha kwebhokisi yebhaskiti, yenza uhlengahlengiso kubhasikidi kube lula ngakumbi.
v Ukuxhotyiswa nge Shaft Shaft ngomsebenzi omkhulu wokutsala umothuko, owenza ngcono ukuhamba endleleni.
v Inkqubo yokuhluza ioyile yeHydraulic, ndikukhumbuze ukuba ubuyisele ioyile ye-hydraulic xa kukho ukungcola kwioyile.
v Ibhasikithi kunye nenkqubo yokutshixwa kwengalo kuthintele izixhobo zomzimba xa zithuthwa.
v Eyabantu I-LED Izibane zezikhukula kwiqonga lokusebenza
v Ukuxhotyiswa ngezibane eziqhekezayo ezidityaniswe netrektara.
v Ukuxhotyiswa ngezibane zokulumkisa kwimilenze nganye.
v Ibhasikiti yesandla sokuchasana.
v Ukuxhotyiswa ngemiqadi yokhuseleko ukukhusela umsebenzisi.
v Isithuthi esijikelezayo esizinzileyo, ukujikeleza okungu-360 °.
v Wide Ufikelelo oluthe tyaba ukusuka kwi-5m ukuya kwi-10.5m ngeengalo zeteleskopu
v Max 40Km Isantya sokuSebenza
v Amandla amaninzi okukhetha, njenge-AC, DC, AC & DC, Idizili, iGesi njalo njalo.
v Unikelo SIMAHLA iindawo zokunxiba ngokukhawuleza zokutshintsha ngokukhawuleza
Ixabiso le-Aerial Boom Lift
Ixabiso elichaziweyo lokuphakamisa ixabiso
Ukucacisa ixabiso leBoom Lift
Ukuchaza ixabiso leBoom
Ixabiso lokuPhakamisa kombane
Ixabiso leKnuckle Boom Lift
Ixabiso elizimeleyo lokuPhakamisa iBoom
Ixabiso elincinci lokuPhakamisa iBoom
Ixabiso lokuphakamisa ixabiso lesigcawu
Ixabiso leTrailer Boom Phakamisa